Kooxda Brighton oo guul soo laabasho ah ka gaartay Arsenal oo marti u aheyd… +SAWIRRO – Gool FM
(England) 20 Juun 2020. Kooxda Brighton & Hove Albion ayaa guul soo laabasho ah kaga gaartay dhigeeda Arsenal garoonka The American Express Community, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1 kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Brighton & Hove Albion iyo Arsenal.
Daqiiqadii 68-aad kooxda Arsenal ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 0-1 ka dhigay Nicolas Pepe, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Bukayo Saka.
Laakiin daqiiqadii 75-aad kooxda Brighton & Hove Albion ayaa heshay goolka barbaraha, waxaana 1-1 ka dhigay Lewis Dunk.
Daqiiqadii 90-aad kooxda Brighton & Hove Albion ayaa hogaanka u qabatay dheesha, waxaana 2-1 ka dhigay Neal Maupay.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-1 ku adkaatay kooxda martida loo ahaa ee Brighton & Hove Albion, kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka The American Express Community.